Rai'sul wasaare Abiy oo booqashadiisii ugu horeysay ku tagay caasimadda Tigrey - Politicians in the News
Rai'sul wasaare Abiy oo booqashadiisii ugu horeysay ku tagay caasimadda Tigrey
Rai’sul wasaare Abiy Axmed
Rai’sul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku tagay caasimadda gobolka Tigrey ee Mekele tan iyo intii uu amray howgalkii militari ee ka dhanka ahaa gobolkaasi.
Abiy Ahmed ayaa ka qeyb galay kulankii ugu horeeyay oo ay yeeshaan golaha cusub ee loo dhisay in ay gobolkaasi hogaamiyaan.
Dhanka kale waxaa uu rai’sul wasaaraha Itoobiya kulan la qaatay dhigiisa dalka Sudan Cabdalla Xamdok.
Sargaal u hadlay xukumadda Sudan ayaa sheegay in Mr Xamduuk uu diyaar u yahay in uu dhexdhexaadiyo labada dhinac ee itoobiya isku haya.
Balse bayaan uu soo saaray My Abiy laguma xusin in dhexdhexaadin ay jirto.
Mr Abiy ayaa bayaankiisa ku sheegay in wefdiga Sudan ay taageereen tallaabadii militari ee ay dowladda dhexe ka qaaday gobolka Tigrey ee ku yaalla waqooyiga Itoobiya.
Dalka Sudan ayaa waxaa u qaxay 50,000 oo ah qaxootiga ka barakacay dagaalka gobolka Tigrey.
Horraantii bishii November ayay ahayd markii duulaan uu amray rai’sul wasaare Abiy lagu qaaday gobolka Tigrey.
Qaxooti badan ayaa u qaxay dalka Sudan
Maxaa sababay khilaafka?
Waxay Dr Abiy Axmed horay ugu eedeeyeen inuu isku dayayo sidii uu “ku sameysan lahaa dowlad sal adag”.
“Waligeen ma taageeri doonno qof walba oo ujeeddadiisu tahay inuu kala dhantaalo xaqa aan dadaalka dheer usoo galnay ee ah inaan “ismaamulno” iyo inaan “go’aan gaar noo ah lahaanno,” ayuu yidhi hoggaamiyaha gobolkaas, Debretsion Gebremichael, oo hadlay bishii August.
wpaadmin2020-12-13T22:12:15-06:00December 13th, 2020|Categories: Ethiopia|Tags: Abiy Ahmed|
Tanzania Kenya United States South Africa Ethiopia Israel United Kingdom Palestine Mexico Germany Russia Turkey Egypt India Argentina Brazil France China United Arab Emirates Ireland Iran Nigeria Uganda Armenia Canada